Na E3 2016, egwuregwu 3 ka ị leba anya ekwuputala | Gam akporosis
E3 bụ ihe omume kachasị mkpa n’afọ maka ihe ọ bụla metụtara egwuregwu. Ngosipụta nke imirikiti ụlọ ọrụ kachasị mma na mpaghara ahụ na-ezukọ iji gosipụta mgbakwunye ha kachasị mma nke afọ, dịka Nintendo, Bethesda na ndị ọzọ ole na ole. Ọ na-eje ozi iji malite asịrị na nsụgharị ndị ọzọ maka afọ ole na ole dịka ọ ga-adị ndị ọzọ Okenye Akwụkwọ mpịakọta a na-emepe emepe na nke ahụ enweghị teknụzụ zuru ezu iji nwee ike mezuo echiche ha nwere maka ihe ga-abụ nnukwu epic njem ọzọ nwere ikike Bethesda kachasị mma.
Na E3 anyị nwekwara ozi ọma maka ịgba egwu maka gam akporo na iOS, nyiwe abụọ kachasị mkpa maka ngwaọrụ mkpanaka na nke na-arịwanye elu na-aga n'ihu n'ihi nde ndị egwuregwu na-eji akara ndị a egwu egwuregwu. N'ime afọ a mgbe anyị nwere akụrụngwa ka mma, anyị ga-enwe mmadụ atọ bịara ọhụrụ nke egwuregwu vidiyo atọ ga-enye ọkwa maka ụfọdụ njirimara na onye ọzọ ga-abịa site na onye ọ bụla na-abịa. Egwuregwu vidiyo atọ ị ga-ege ntị n'ihi ike ha na ahụmịhe dị ukwuu nke onye ọ bụla n'ime ya ga-enye.
1 Akwụkwọ Okenye - Ochie
3 Batman - Usoro Telltale
Akwụkwọ Okenye - Ochie
Bethesda achọtala ezigbo enyi na Fallout Shelter, egwuregwu vidio na-aga n'ihu na-emelite na, dị n’oge ọkọchị, ga-enwe mmelite kachasị nke ga - enyere anyị aka igwu egwuregwu ụfọdụ ọbụlagodi na PC. Nke a ga - eme ka anyị mata na ụlọ egwuregwu vidio a ga-aga n'ihu na-ebupụta aha ọhụụ na bulie ogo egwuregwu site na ekwentị mkpanaaka wee si otú ahụ kụziere ndị ọzọ otu esi enye ụdị freemium nke anaghị eji "whales" ma ọ bụ "whales" eme ihe.
Bethesda ekwuputala Akwụkwọ Mpịakọta Okenye - Akụkọ Ochie, a kaadị atụmatụ nke na-eduru anyị gaa na Akwụkwọ Mpịakọta Okenye. Ndị na-egwu egwu ga-enwe ike ịnwe oche ha ma duru ndị agha ha na ụdị egwuregwu atọ dị iche iche. Enwere ike ịmepụta oche ọ bụla site na iji àgwà ise n'ime ise: ike, ịdị gara gara, ọgụgụ isi, ume na uche.
Uche zuru ezu ga-enwe "klaasị" nke ha ga-adabere na njirimara ndị ahụ ahọrọ. Kedu ihe ga - eduga anyị ikpokọta agility na ike nke mere na ọ na-ebute na oche a na-akpọ "onye na-agba ụta", ebe ọ bụrụ na anyị aga iguzogide na ọgụgụ isi, ọ ga-ebute otu ihe metụtara anwansi. ma ọ bụ anwansi. Ebumnuche bụ ịhọrọ oche kachasị mma kachasị mma iji nwee ike imeri, nke ga-emetụta atụmatụ gị.
Egwuregwu vidio ọzọ anyị kwurula banyere ya kwa oge, n'ihi mmetụta ọ na-enwe, ịmara maka ụbọchị ọ ga - nwee ngwa eji ejiji, na ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ndị ọrụ ga-etinye ya ịchụ nta Pokémon n'okporo ámá, na-alụ ọgụ maka «mgbatị hubs» ma chee egwuregwu ndị ọzọ ihu.
Nintendo na Niantic jikọrọ aka mejupụta otu ahụmahụ eziokwu dịwanye elu ma ka anyị hụ nnukwu ìgwè ndị ọrụ na ekwentị ha na-achụ Pokémon ahụ mgbe ha na-agagharị na obodo ma ọ bụ gaa leta ndị enyi n'obodo ndị ọzọ. Ọ ga-abụ ihe na-atọ ụtọ ịhụ ahụmịhe ọ na-enye mgbe ọtụtụ nde ndị egwuregwu gburugburu ụwa na-eyi ngwa ngwa ahụ na-eyi uwe, ọ bụ ezie na ọ gaghị abata n'ụbọchị mmalite ya. Nnukwu nnabata ga-eweta nnukwu mgbanwe maka ekwentị anyị.
Batman - Usoro Telltale
Ekwuputara egwuregwu Telltale ise ji maka otu n'ime ndị dike a ma ama na-atọ ọchị, ndị ọchị ma ọ bụ Batman. Ngbali ohuru a site na omumu nke gbadoro anya na ihe omimi nke mkparita uka di nkpa, anyi g’enwe ike igosiputa onwe ya dika Batman Wayne, lekwasi anya n’inwe ike idozi nsogbu ndia nile metụtara ya. mpụ, nrụrụ aka na ndị ọjọọ ahụ hụrụ n'akụkụ ọ bụla nke Gotham City.
A ọhụụ ọhụrụ maka onye isi ojii nke ga-abịakwute anyị ọkachamara n’agha ndị a dị ka ọ bụ TellTale Games nke wetara anyị Minecraft, Game nke n'ocheeze na Ndị nwụrụ anwụ na-aga ije.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Egwuregwu vidio 3 ọhụrụ ekwuputara na E3 2016 ilezi anya